သင့်ရဲ့အလုပ်က သင့်ရဲ့ကျောကို ထိခိုက်စေပါသလား? - Malaysia Healthcare
သင့်ရဲ့အလုပ်က သင့်ရဲ့ကျောကို ထိခိုက်စေပါသလား?
ဩဂုတ် 20, 2021
သင်သည် ခါးနာဝေဒနာကို ခံစားနေရပါလျှင် သင်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် UK မှလူဦးရေ ၈၀% သည် သူတို့၏ဘ၀တွင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်မျှ ခါးနာခြင်းကို ကြုံတွေ့ရတတ်ပြီး၅၀% ခန့်သည် ၂၄ နာရီထက်ကြာရှည်စွာ ခါးနာခြင်းကို ခံစားကြရပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် အတော်များများဆင်တူကြပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ မသန်စွမ်းမှုကို ဖြစ်စေသည့် အဓိကအကြောင်းအရင်းအဖြစ် ဖော်ပြထားပါသော ကျောအောက်ပိုင်းနာကျင်မှုခါးနာခြင်းသည် အလုပ်ခွင်၌ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုကြီးမားစွာဆုံးရှုံးစေပါသည်။ ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန်တို့တွင် နှစ်စဉ်သန်း ၁၀၀ ဆုံးရှုံးကြရပါသည်။ ဖြစ်နေသည်မှာကား ထိုအလုပ်ချိန်များ၏ ဆုံးရှုံးစေသည့်ခါးနာဝေဒနာဟာ အလုပ်ကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းသာ ဖြစ်နေပါသည်။
ကျော၌ ဝေဒနာဖြစ်ခြင်းသည် အလုပ်နှင့်ဆက်နွှယ်နေသည့် ဒုတိယအဖြစ်များဆုံးသော ဝေဒနာဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ဖိမိထားသောအာရုံကြောများကြောင့် ခြေလက်အောက်ပိုင်း၌ ထုံကျဉ်ခြင်းနှင့် နောက်ကျောမသက်မသာဖြစ်ခြင်း၊ ဖောင်း(စူ)နေခြင်း (သို့) herniated discs (နျူကလိယ၏အစိတ်အပိုင်းသည် annulus ရှိအက်ကွဲကြောင်းတစ်ခုကို တွန်းပို့သောအခါ herniated disk ဖြစ်ပေါ်သည်။) ကြောင့်ပြင်းထန်သော နာကျင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကဲ့သို့ ပြင်းထန်သောကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများပါ၀င်သော အလုပ်အကိုင်များသည်အန္တရာယ်ပိုများစေပါသည်။ တွန်းခြင်း၊ ဆွဲခြင်း (သို့) မတင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရာတွင် ကျောရိုးကို အများအားဖြင့်လိမ်ခြင်း (သို့) အလွန်အကျွံဆွဲဆန့်များ လုပ်မိခြင်းတို့ကြောင့် ကျောနာဝေဒနာကို ဖြစ်စေလေ့ရှိပါသည်။
သူနာပြုများ၊ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များနှင့် ငွေရှင်းကောင်တာမှ ဝန်ထမ်းများကဲ့သို့ နာရီပေါင်းများစွာ မတ်တပ်ရပ်နေရသူများသည်လည်း ကျောနာဝေဒနာဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါသည်။ ရုံးဝန်ထမ်းများလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေ အတူတူလောက်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျောပြဿနာများစွာသည် ကိုယ်ဟန်အနေအထားမမှန်ခြင်းနှင့် ကြာရှည်စွာထိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲလှုပ်ရှားခြင်း၊ ကြာရှည်ထိုင်ခြင်းသို့မဟုတ် မတ်တပ်ရပ်ခြင်းတို့ပါဝင်သော အလုပ်များတွင် ကျောရိုဝေဒနာသည် ကျောရိုးရှိကျောရိုး (သို့မဟုတ်) ကျောရိုးရှိအရွတ်များနှင့်ကြွက်သားများကို ရေရှည်ဖိထားခြင်းများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကျောနာဝေဒနာသည် ER လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သော တင်းမာခြင်း (သို့မဟုတ်) မချိမဆံ့နာကျင်စေသောဝေဒနာနှင့် ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။ လျင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်လာသော အလွန်ပြင်းထန်သော နာကျင်မှုသည် နှစ်လအတွင်းပျောက်ကင်းတတ်ပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်း နာတာရှည်ခါးနာခြင်းသည် ရေရှည်ပြဿနာဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အနည်းငယ်နာကျင်မှုမှ စတင်နိုင်သော်လည်း နာကျင်မှုတိုးလာနိုင်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာလည်း ကြာနိုင်ပါသည်။ ကျောနာအမျိုးအစားမခွဲခြားဘဲ၊ ဝေဒနာရှင်အများစုအတွက် နောက်ဆုံးရလဒ်သည် အချို့မသန်စွမ်းမှုများနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ဘဝအရည်အသွေးနိမ့်ကျသွားကြပါသည်။
ကျောရိုးကိုကြွက်သားများ၊ အာရုံကြောများ၊ အရိုးများ၊ ကျောရိုးပြားများနှင့် အရွတ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် နာကျင်မှုဖြစ်စေနိုင်သော အခြေအနေများစွာရှိပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရင်းတစ်ခုမှာ အာရုံကြောများကျိန်းစပ်ခြင်းနှင့် ခြေထောက်အနောက်ဘက်၌ ဆက်သွယ်နေသော အာရုံကြောကြီးများ (သို့) အနောက်ဘက်မှအာရုံကြောသေးများ အတားအဆီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခြားအကြောင်းအရင်းများမှာ နောက်ကျော၊ အရိုး၊အရွတ် (သို့) အဆစ်များပျက်စီးခြင်းနှင့် disc ယိုယွင်းခြင်းများတွင် erector spinae ကြွက်သားများ တင်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သင်ဟာ အသက် ၃၀ နှင့် ၆၀ ကြားရှိနေပါလျှင် ကျောနာခြင်းသည် ကြွက်သားများ သို့မဟုတ် အခြားပျော့ပျောင်းသော တစ်သျှူးများကြောင့် သို့မဟုတ် ကျောရိုး disc နေရာ၌ အလိုလိုနာကျင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ခါးနာခြင်းအတွက်ကုသမှုသည် ၎င်း၏ အကြောင်းရင်းပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ တင်ပါးရိုးအာရုံကြောကိုက်ခဲခြင်းအတွက် ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် နာကျင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြွက်သားများ တောင့်တင်းခြင်းကို ဖြေလျှော့ရန် ဆေးထိုးနိုင်ပါသည်။ ပေါက်ပြဲနေသော သို့မဟုတ် herniated discs (နျူကလိယ၏အစိတ်အပိုင်းသည် annulus ရှိအက်ကွဲကြောင်းတစ်ခုကို တွန်းပို့သောအခါ herniated disk ဖြစ်ပေါ်သည်။) မှ တင်ပါဆုံရိုးအာရုံကြောနှင့်စပ်သော နာကျင်မှုအတွက် သင်၏ဆရာဝန်သည် ကျောရိုးအာရုံကြော ပတ်၀န်းကျင်တစ်ဝိုက်သို့ steroid ဆေးထိုးနိုင်ရန် သို့မဟုတ်ခွဲစိတ်နိုင်ရန် အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်း၊ နှိပ်နယ်ခြင်း (သို့) အာထရာဆောင်းကုသမှု ပါ၀င်သောphysiotherapy ကာယကုထုံးကိုလည်း အကြံပြုနိုင်ပါသည်။
ယခင်က နောက်ဆုံးအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်ခံရသော်လည်း ကျောရိုးပြဿနာများကို သက်သာစေသောခွဲစိတ်မှုနည်းပညာများသည် သိသိသာသာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါသည်။ ဖိမိနေသောအာရုံကြောကို ကုသရန်ခွဲစိတ်မှုသည် သုံးပတ်မှလေးပတ်အထိ ပြန်လည် သက်သာလာပါသည်။ ကျောရိုးနှင့်ဆိုင်သော အခြားခွဲစိတ်နည်းများသည် ကျောရိုးအာရုံကြောများထိခိုက်မှုကို ကုသရန် discectomy (အာရုံကြောအမြစ် (သို့) ကျောရိုးပေါ်တွင်ဖိနေသော lumbar (ကျောအောက်ပိုင်း) herniated disc ကိုဖယ်ရှားရန် ခွဲစိတ်ခြင်း) နှင့် disc အစားထိုးကုသခြင်းနှင့်interlaminar implant နှင့် laminectomy ကုသနည်းတို့ဖြင့် ကျောရိုးအာရုံကြောများအပေါ်ဖိအားကို သက်သာစေပါသည်။
သင်ဟာ ပျော့သည်ဖြစ်စေ၊ ပြင်းထန်သည်ဖြစ်စေ၊ ခါးနာဝေဒနာခံစားနေရလျှင် အရေးအကြီးဆုံးမှာ ဆရာဝန်နှင့်ပြသရန် ဖြစ်ပါသည်။ စောစောစီးစီးဆေးကုသမှုခံယူခြင်းသည် နာကျင်မှု ဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ပိုမိုပြင်းထန်သောကုသမှု လိုအပ်နိုင်သည့်အခြေအနေသို့ ဆက်လက်မရောက်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။သင့်ဆရာဝန်က အလုပ်၌စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ချဖို့နည်းလမ်းများ သို့မဟုတ် ကျောကြွက်သားများကို အားကောင်းစေဖို့အတွက် သို့မဟုတ် ကိုယ်ဟန်အနေအထားဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ပြုပြင်နိုင်ဖို့ physiotherapy ကာယကုထုံးကိုအကြံပေးပါလိမ့်မည်။ ရုံး၏လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာမှု နှင့် အလေ့အထများတွင်သင်၏ကျောကို ကာကွယ်ရန် ကူညီနိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များစွာလည်း ရှိပါသည်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလိုအပ်သော ပိုမိုပြင်းထန်သော ကျောဝေဒနာအခြေအနေများအတွက် ကုသမှုသည်ငွေကုန်ကြေးကျများနိုင်ပါသည်။ အလုပ်နှင့်ဆက်နွယ်သော အခြေအနေဖြစ်ပါက ကုသမှုကုန်ကျစရိတ်ကို ကာမိရန် လျော်ကြေးငွေအတွက် သင်၏အရည်အချင်းပြည့်မီမှုအတွက် အကြံဥာဏ်ရယူပါ။ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ သင်ကုန်ကျစရိတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ခေတ်မီသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အတွေ့အကြုံရင့်ကျွမ်းကျင်သူများကို လက်လှမ်းမီနိုင်သော နိုင်ငံခြားသို့ သွားရန်ဖြစ်ပါသည်။ နာတာရှည်ခါးနာခြင်းသည်အားလျော့စေသောကြောင့် ဝေဒနာရှင်များသည် စိတ်ဖိစီးမှုများ၊ မပျော်ရွှင်မှုများ သို့မဟုတ် စိတ်ကျရောဂါကိုများစွာ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ကုသမှုခံယူနေစဉ် နေသာသောနေရာ၌ ကောင်းသောအားလပ်ရက်ရယူခြင်းဟာလည်းဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းသာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သန်းပေါင်းများစွာသော လူကြီးများသည် ကျောနာဝေဒနာခံစားနေရသဖြင့် သင်အလေးအနက်ထားသင့်သော လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်၌ ပြန်ပြီးအဆင်ပြေစေမည့် အလေ့အကျင့်များကို လက်ခံပြီးသင့်ကျောကို တင်းအားလျော့အောင် မည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်သည်ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်ပြပါ။ သင်ဟာ ကျောနာဝေဒနာတစ်မျိုးမျိုးခံစားနေရလျှင် ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ကုသပါ။ လူများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ခါးနာခြင်းသည်အလုပ်နှင့်ဆက်နွှယ်သော ဝေဒနာလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်ကို အသက်ကြီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ခြင်းမှ အမှတ်မှားကြပါသည်။ အလုပ်သည် အမြဲတမ်းပျော်စရာကောင်းခြင်း မဟုတ်သော်လည်း သင့်ကျောကို မနာကျင်စေသင့်သည်မှာလည်း သေချာပါသည်။
အောက်တိုဘာ 8, 2021